उपप्रधानमन्त्री गच्छदारद्वारा आचारसंहिता उलंघन | Mechikali Daily
उपप्रधानमन्त्री गच्छदारद्वारा आचारसंहिता उलंघन
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: २५ भाद्र २०७४, आईतवार ०५:४५
काठमाडौँ,। निर्वाचन आयोगले उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र ऊर्जाराज्यमन्त्री अमरसिंह पुनले निर्वाचन आचार संहिता उलंघन गरेको उल्लेख गर्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरणका लागि निर्देशन दिएको छ । ‘आचारसंहिता उलंघन गरेको विषयमा किन कारवाही नगर्ने ? भन्ने प्रश्न सहित आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट वीरगञ्ज महानगरका उम्मेदवार विमलकुमार श्रीवास्तवले पनि आचारसंहिता उलंघन गरेकाले उनको ‘उम्मेदवारी रद्द किन नगर्ने ? भन्दै आयोगले २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण मागेको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको निर्वाचनको उपप्रधानमन्त्री गच्छदार सहित नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले आचारसंहिता विपतरीत गाडी र मोटरसाइकल ¥याली निकालको आयोगको निर्णय छ । उम्मेदवारको श्रीवास्तवको पक्षमा प्रचारका लागि गच्छदार सहितका नेताहरुले आचारसंहिता विपरीत हुनेगरी ¥याली गरेका थिए । लोकतान्त्रिक फोरमले २० र २५ वटा गाडीहरू र १०० वटाभन्दा बढी मोटरसाइकलसमेतको ¥याली र जुलुस निकालिएको भन्ने उजुरी आयोगमा परेको थियो । त्यही उजुरी छानविन गरी आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
यसैगरी राज्यमन्त्री पुनले बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका ११ फत्तेपुरमा कांग्रेस कार्यकर्तालाई सरकारी गाडीमा राखेर निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दै हिंडेको भन्ने उजुरीको छानविन गर्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । राज्यमन्त्री पुनले सरकारी साधान स्रोतको दुरुपयोग गरी आचार संहिताले उलंघन गरेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले नवलपरासी र रुकुममा भदौ मसान्तसम्म जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगको शनिबार बसेको बैठकले रुकुम (पूर्वी भाग), रुकुम (पश्चिम भाग), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मा जिससको कार्यालय स्थापना गर्न भनेको हो ।
आयोगले यसअघि नै जिसस कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई भनेको थियो । तर मन्त्रालयले जवाफ नदिएको भन्दै आयोगले भदौ मसान्तभित्र कार्यालय स्थापना गर्न भनेको हो ।
नवलपरासी र रुकुम दुई प्रदेशमा परेको छ । सरकारले भदौ ५ गते नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) प्रदेश ४ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रदेश ५ तथा रुकुम (पूर्वी भाग) प्रदेश ५ र रुकुम (पश्चिम भाग) प्रदेश ६ मा रहने गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्न आयोगलाई भनेको थियो । त्यस अनुसार आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत पनि यकिन गरिसकेको छ । तर जिजस संख्या यकिन हुन नसक्दा चुनाव हुन सकेको छैन ।